Google Maps na-agbakwunye ozi gbasara oke ọsọ mgbe anyị na-agagharị | Akụkọ akụrụngwa
Afọ ole na ole gara aga, e jiri ekwentị na ngwa ndị ọzọ weghaara ngwaọrụ GPS nke na-enye anyị ohere ịgbaso ụzọ nwere otu ụzọ ahụ dịka TomTom ma ọ bụ ngwaọrụ Garminmelite TomTom ọsọ ese foto n'efu). Modelsdị ndị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ndị a kwalitere na mgbakwunye na-eduzi anyị nzọụkwụ site na nkwụsị ruo ebe anyị na-aga ha gwakwara anyị gbasara oke ịgba ọsọ nke ụzọ anyị na-aga, na mgbakwunye na ịgwa anyị ma anyị gafere ya. Ozi a nwere ike ịdị oke mkpa ọkachasị n'obodo, ebe oke ịgba ọsọ anaghị abụ otu.
TomTom, dị ka Garmin, kpebiri ịkwụsị nrụpụta ngwaọrụ wee gbanwee gaa na nyiwe mkpanaka, iji nye otu ọrụ GPS mana site na ngwa. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọrụ map ndị a zuru oke, ebe a na-akwụ ụgwọ ha, ọtụtụ mmadụ họọrọ iji Google Maps, nke ọnwa ole na ole na- na-enye anyị ohere ibudata site na Wi-Fi ebe anyị ga-aga ma gaa site na ha.
Mana otu ntụpọ kachasị mkpa nke Google Maps nwere mgbe ọ na-eduzi anyị n'okporo ụzọ enweela enweghị ozi gbasara ịgba ọsọ nke njem ahụ anyị na-eme. Enweghị ozi a nwere ike ịpụta na anyị na-akwụ ụgwọ, ọkachasị na Spen, bụ ebe ihe ngosi okporo ụzọ na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ, ọkachasị ndị na-egosi oke ịgba ọsọ.
Mana o mechara dị ka ụmụ okorobịa si Mountain View jidere na na-amalite inye ụdị ozi a site na itinye ha n'ọrụ. Ọ bụghị oge mbụ Google nwalere ụdị ozi a na ngwa ya, ebe ọ bụ na v9.35 beta ụdị nwere mgba ọkụ nke mere ka anyị rụọ ọrụ ya, ngbanwe nke furu efu na betas ọzọ.
Mana ọ dị ka arụ ọrụ a ọzọ, ugbu a na ndabara, dị ka ọtụtụ onyonyo nke ụfọdụ ndị ọrụ zipu na Reddit. Ozi banyere ọsọ nke ngalaba anyị nọ na ya ma ọ bụrụ na idobe ya n'akụkụ ala aka ekpe nke ihuenyo ahụ, dị n’elu oge anyị hapụrụ iji ruo ebe anyị na-aga. N'oge a anyị amaghị oge ọ ga - ewe maka nhọrọ ọhụrụ a iru ndị ọrụ niile, mana enwere olile anya ọ ga - adịghị anya, ebe ọ bụ otu n'ime ndị ukwu mana ọ nwere Goolge Maps.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » GPS » Google Maps na-agbakwunye ozi gbasara oke ọsọ mgbe anyị na-agagharị